Vivo Y17 zuru ezu tupu e bido ya | Gam akporosis
A na-edozi igbe ahịa na nkọwa zuru ezu nke Vivo Y17: kpughee igwefoto ya okpukpu atọ na ndị ọzọ
El Vivo Y17 Ọ bụ ekwentị dị n’etiti nwere nnukwu batrị a ga-ebupute n’oge adịghị anya. Mgbe ị na-eche maka ngwaọrụ a, na mbụ, ụfọdụ n'ime nkọwa nkọwa ya dị egwu na akwụkwọ mmado.
N'oge a, mkpanaka ahụ apụtawo dị ka onye protagonist na a nzacha zuru ezu na nkọwa gị. E gosipụtakwala ihe osise igbe igbe ya.
E kpughere Vivo Y17 n'ihu nke mmalite
Nzacha nkọwa nke Vivo Y17
Ebe kachasị amasị ire ekwentị nwere ike ịbụ batrị 5000 mAhMana o nwere ihe karịrị nke ahụ ị ga-enye, dịka mkpebi ngosi 1,544 nke anụ ọhịa ahụ bụ 720 x 6.35-pixel HD + ngosipụta na akara ngosi mmiri maka igwefoto selfie 20MP.
N'aka nke ọzọ, el ufọt ufọt ga-eji ihe octa-core processor kwadoro, nke ekwuru na ọ bụ Mediatek Helio P35. Na mkpokọta, 4 GB nke Ram na 128 GB nke ohere nchekwa bụ ihe anyị nwere ike ịhụ na ekwentị. Agbanyeghị, ekwughi okwu oghere kaadi microSD, mana enwere nkwado OTG.
Vivo Y17 nwekwara kamera atọ na azụ: a isi 13 MP jikọtara na 8 MP obosara-n'akuku igwefoto na a 2 MP omimi mmetụta. Ndia doziri n’uzo ma nwekwaa otu ulo. Enwekwara nyocha mkpịsị aka na azụ.
Vivo Y17 leaked mkpọsa igbe
Vivo ga-ebido ekwentị na Funtouch OS 9, nke dabere na A gam akporo 9 achịcha. Na mgbakwunye, ngwaọrụ ahụ ga-adaba na SIM 1 na 4G LTE band 1, 3, 5, 8 na 40, na-atụle 159.43 x 76.77 x 8.92 mm ma tụọ gram 190.5.
Dị ka a hụrụ na foto dị n'elu, igbe mkpọsa ahụ na-acha ọcha ma nwee foto ekwentị n'ihu. Egosiri ike nke batrị, RAM na nchekwa na ya.
Vivo S1: Ekwentị ọhụrụ dị n'etiti etiti
Enweghị ozi ọ bụla na ụbọchị ewepụtara ya na ọnụahịa ya ere. N'agbanyeghị nke ahụ, a na-atụ anya na ọ ga-adị na India na Indonesia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A na-edozi igbe ahịa na nkọwa zuru ezu nke Vivo Y17: kpughee igwefoto ya okpukpu atọ na ndị ọzọ
Sony Xperia 1 ga-amalite na njedebe nke ọnwa